Fekitari yakaita inopisa-kutengesa China Wholesale 100% PP Multifunctional yakarukwa bhegi
Chinangwa chedu chingave chekupa zvinhu zvakanaka zvemhando yepamusoro pamitengo yemakwikwi, uye nepamusoro-notch sevhisi kune vatengi pasi rese. uye kazhinji kusimbisa masevhisi akanaka.
"Kuve vatengi vanovimbwa uye vanosarudzika mutengesi wemhando" ndicho chinangwa chekambani yedu. Tave tichiomesera chikamu chose chebasa redu. Tinogamuchira nemoyo wese shamwari kutaurirana bhizinesi uye kutanga kubatana. Tinovimba kubatana maoko neshamwari mumaindasitiri akasiyana kugadzira ramangwana rakajeka.
"Kuve vatengi 'anovimba uye anofarira mhando mutengesi" ndicho chinangwa chekambani yedu. Tave tichiomesera chikamu chose chebasa redu. Tinogamuchira nemoyo wese shamwari kutaurirana bhizinesi uye kutanga kubatana. Tinovimba kubatana maoko neshamwari mumaindasitiri akasiyana kugadzira ramangwana rakajeka.
1. Zvinodikanwa zvezuva nezuva: Vavezi, varimi, vatakuri vezvinhu, uye vatengesi havashandisi zvigadzirwa zvepurasitiki zvakarukwa. Kune zvigadzirwa zvepurasitiki zvakarukwa kwese kwese muzvitoro, matura, uye mudzimba. Zvigadzirwa zvepadding zvemakemikari fiber makapeti zvakatsiviwawo nemachira epurasitiki akarukwa. Zvakadai semabhegi ekutengesera, mabhegi ezvitoro.
2. Geotechnical engineering: Kubva pakagadzirwa geotextiles kuma1980s, kushandiswa kwemachira epurasitiki akarukwa kwakatambanudzwa, uye akashandiswa zvakanyanya munzvimbo diki dzekuchengetedza mvura, magetsi emagetsi, migwagwa mikuru, njanji, zviteshi zvegungwa, kuvaka migodhi, uye mainjiniya emauto. kuvaka. Mune aya mapurojekiti, geotextile zvinhu zvine mabasa ekusefa, kudhiza, kusimbisa, kuvharira, uye anti-seepage. Plastiki geotextiles ndeimwe yezvigadzirwa zve geotextile.
3. Zvishandiso zvekudzivirira mafashamo: Mabhegi akarukwa akakosha pakurwisa mafashama uye kubatsira panjodzi. Mabhegi akarukwa akakoshawo pakuvaka madhamu, mahombe enzizi, njanji, nemigwagwa mikuru. Iwo mabhegi akarukwa anopokana neruzivo uye zvinhu zvekuyamura nenjodzi zvakarukwa.
1. Mucheka wakarukwa tensile mutoro.
Upamhi hwemachira akasiyana-siyana akarukwa anobata zvakananga maitiro ekugadzira bhegi. Pamucheka wechubhu, iyo warp inoshandiswa kuratidza hupamhi, uye warp yakaenzana nehafu yedenderedzwa.
Width shrinkage rate, hupamhi hwemachira ose akarukwa mushure mekurukwa uye kupeta, mushure mokusunungura, kucheka, kudhinda, uye kusona, hupamhi hwebhegi rakagadzirwa iduku duku kudarika upamhi kana mhepo inoputika, tinodaidza hupamhi shrinkage.
PP flat wire braid yakakora, yakafara uye yakaoma.
HDPE flat wire braid yakapfava, yakatsetseka uye haina kukora.
Kuwedzera calcium masterbatch kune PP flat shinda kunopa ruoko rwakafara kunzwa. Kuwedzera HDPE shoma kuPP kuchaita kuti ipfave.
Waya yakati sandara itete, weave yakati sandara, ruoko rwakapfava, uye waya yakati sandara yakafara. Pakuruka jira, pane zvakawanda zvakapetwa uye ruoko runonzwa rough.
Zvakapfuura: China Factory Supplier PP Yakarukwa Bag Multifunctional yakarukwa bhegi
Zvinotevera: Inokodzera marudzi ese ekushandisa, epurasitiki PP akarukwa mabhegi
Yemhando yepamusoro Polypropylene Yakarukwa Bag
Multifunctional Woven Bag
Polypropylene Yakarukwa Bag
Yakakobvu Yakarukwa Bag
Yakanakisa mhando China Anti Grass Mucheka UV Vanorapa...
China Factory Supplier PP Yakarukwa Bag Multifuncti...
Pp Woven, Heavy Duty Weed Barrier, Biodegradable Weed Control Fabric, Mvura Inopindira uye Inofema Weeding Mucheka, Weed Control Fabric Roll, Kusakura Mumucheka,